Faafidda Coronavirus ayaa jabinaysa silsiladda sahayda ah! | RayHaber | raillynews
HomeTURKEYGobolka Marmara34 IstanbulFaafidda Coronavirus ayaa jabinaysa silsiladda sahayda ah!
26 / 03 / 2020 34 Istanbul, tareenka, GUUD, WADADA, Nidaamyada Tire Wheels, Headline, Gobolka Marmara, TURKEY
coronavirus ka dillaacay silsilada sahayda
Markii uu cudurku ka dillaacay coronavirus, waxaan si cad u aragnay sida saameynta dibu dhaca (baahida loo buunbuuniyo) ay ugu dhacdo silsiladaha sahayda. Alaabada qaarkood waxay noqdeen wax aan muuqan, khaanadaha suuqyadu faaruq yihiin oo qiimahoodu labanlaabmay. Warshadaha waxsoosaarka ayaa istaagay dhibaatooyin la xiriira qayb ahaan. Gobollada ayaa qaaday tallaabooyin dheeri ah si ay u difaacaan soosaarayaasha. Dhanka kale, waxaa dhacay qaraxyo elektaroonig ah. Adeegyada qaadista ayaa si aad ah u kordhay.
Masaafada jireed waxay noqotay muhiim. Silsiladaha ku-meelgaarka ah ee caafimaadka ayaa si dhakhso leh loo abuuri lahaa. Gawaarida TIR waxay istaagtay xudduudaha waxaana sameysay durumaha TIR. Wadayaasha gawaarida ayaa bilaabay in ay dalbadaan muddo 14 maalmood ah oo karantiil ah. Gaadiidka RO-RO, darawalada laguma raaci karo diyaarad iyadoo joogitaankoodana Midowga Yurub la soo gaabiyey. Gawaaridii hore u yaraatay ayaa la laalaabay. Caqabadda haysata gaadiidka wadooyinka, xamuulka ayaa u weecday dhanka badaha iyo tareenka. Waxaa sare u kacay baahida. Sababta oo ah xaqiiqada ah in kontaynarada soo dejinta laguma saari kari waayey waqtigii lagu jiray biyaha badda, markii loo baahan yahay haamaha madhan ee kordhay dekedaha dhoofinta, qiimaha ayaa kor u kacay iyada oo shuruud shidaal nadiif ah ay korodhay. Amarada deg-degga ah ayaa loo diiwaangeliyay gaadiidka hawada. Si kastaba ha noqotee, natiijada ka noqoshada duullimaadyada diyaaradaha rakaabka ah, culeyska culeyska ayaa hoos u dhacay si hoose iyadoo kaydka ayaa la bilaabay in toddobaadyo kadib la siiyo. Wakhtiyada safarka ayaa kordhay natiijada hawlgallada ka-hortagga gawaadhi ee isgoysyada xadka tareenka. Natiijo ahaan, silsiladaha sahaydu ma jabeen? Haa. Saamaynta dilaalka ee silsiladaha sahayda waxaa looga hortagi karaa oo keliya iyadoo la isku wareejinayo silsiladda sahayda. Si dhakhso ah oo qulqulka macluumaadka qulqulaya ayaa ah arrinta ugu aasaasiga ah. Sida Ururka Caafimaadka Adduunku leeyahay: "tijaabo, tijaabo, tijaabo". Dhinacyada silsiladda kaydka ah waa inay horay u sii qorsheeyaan qulqulka deg degga ah ee macluumaadka iyo inay si wada jir ah uga wada shaqeeyaan isku xirnaanshaha ganacsiga. Xallinta xarumo-xarun kaliya kuma filna.
Geedi socodka aan ku jirno ayaa mar kale ina tusay ahmiyada ay leedahay saadka. Waxaan aragnay sababta ay howlaha logistu muhiim ugu yihiin bixinta adeegyo waara labadaba marka laga hadlayo joogtaynta silsiladda sahayda ee caafimaadka iyo la kulanka nafaqeynta, nadaafadda, iwm. Sidoo kale bandowga, baahida aasaasiga ah ee kuwa aan bixi karin waa in la buuxiyaa.
Qiimaha silsiladda alaabada ayaa ah isugaynta wax soo iibsiga, waxsoosaarka iyo saadka. Gunaanadkeenna dhacdooyinka dhowaa waxay muujineysaa inaan u baahan nahay inaan dhisno silsilado sahay badan oo adkeyn leh oo aan kala soocno masiibada iyo tallaabooyinka musiibada ka dib. Waxaan u baahanahay inaan helno qaabab ganacsi oo shisheeye oo aan lala xiriirin inta lagu jiro muddooyinka cudurka faafa. Waqtigan xaadirka ah, maalgashiga kaabayaasha ee kordhin doona ganacsiga shisheeye tareenka ayaa muhiim ah. Way iska cadahay in darawalku isbadal ku sameeyo xuduuda, bedelka weelka (buuxa, buuxa-madhan), bedelida badh-trailer iyo habab si dhakhso ah looga takhaluso ayaa loo baahan yahay in horay loo sii wado. Aagagga Buffer waa in loo abuuraa tan. Wadooyin kale iyo irdaha xuduudaha waa in la tixgeliyaa isla markaana xallinta xalalka degdega ah waa in xisaabta lagu darsadaa. Wadamo kala duwan waxay leeyihiin lacag-bixinno kaladuwan oo loogu talagalay waddooyin kaladuwan. Jidad munaasib ah ayaa lagu abuuri karaa heshiisyo ku meel gaadh ah oo lala galo dalalkan.
Muddada 14-ka maalmood ah ee karantiilinta lagu dalbaday wadayaasha gawaarida ee soohdintiisa xadka waa in laga saaraa arjiga sida ugu dhaqsaha badan waana in loo ogolaadaa gelitaanka / bixitaanka darawalada gawaarida Turkiga iyo kuwa shisheeyaha ah xirmooyinka imtixaanka ee xuduudaha. Kordhinta waa in la sameeyaa oo ku saabsan muddada joogitaanka wadayaasha gawaarida ee dalalka EU-da. Codsiyada fiisada darawallada waa in loo qiimeeyaa sida mudnaanta loo leeyahay waana in fiisaha cusub la dheereeyaa iyada oo la dheereeyo muddada. Isuduwidda hay'adaha hay'adaha ay quseyso, waa inay daabacdaa dulqaadyo la adeegsan karo inta lagu jiro shaqada iyo xilliyada nasashada, taas oo aan u saameyn doonin amniga si xun, oo waqti dheeri waa in loo sameeyaa iyada oo loo eegayo baahida. Si loo fududeeyo howlaha ganacsiga ee weelasha dhoofinta badda, codsashada culeyska Verified Gross Weight (VGM) waa in la joojiyaa, hay'adaha maraakiibta waa iney weydiistaan ​​warqad ballanqaad ah shirkadaha diraya. Nidaamka darawalka / rarka waa in dib loo eegaa waana in la fududeeyo oo la sifeeyaa shaxanka darawallada wadayaasha iyo shirkadaha. Qorshaynta waa in loo sameeyaa bixinta darawallada cusub si ay uga shaqeeyaan gaadiidka caalamiga ah (tababarka, imtixaanka, shahaadada), iyo helitaanka internet ee qaar ka mid ah tababarka SRC iyo imtixaannada waa in la qiimeeyaa.
Shaqada Shift ee shaqaalaha rayidka ah waxay dheereysaa howlaha ganacsiga. Taabadalkeed, habraaca waa in la dardar galiya iyada oo la hubinayo in si hufan loo isticmaalo habsami u socodka howlaha waraaqaha isla markaana loo qaado tillaabooyin looga hortagayo in shaqadu weydo heer kasta. Xirmadan ayaa lagu sheegay, ma jiro taageero gaar ah oo loogu talo galay waaxda saadka, oo ay si weyn u saameysay dillaaca, marka laga reebo in bixinta caddeynta VAT ay dib u dhacday muddo 6 bilood ah. Taageeradan ayaa horay loo siiyay 16 waaxood. Muddadan, SCT ee shidaalka, oo ah shey qiimahoodu muhiim u yahay saadka, waa in meesha laga saaraa oo adeegga waa in lagu bixiyaa iyadoo la raacayo xaalado aad u wanaagsan.
Iyada oo ah tallaabo xilli-dhexdhexaad ah, waddooyinkeenna gaadiidleyda waaweyn ee isku xira waddooyinka waaweyn ee caalamiga ah ee daboolaya waddankeenna iyo xarumaha logistics / tuulooyinka ee laga dhisi doono waddooyinkan waa in la go'aamiyaa si loo sugo socodka badeecadaha loona yareeyo khataraha.
Dalkeenna waxaa ku yaal shirkado badan oo ku baahsan silsiladaha sahayda adduunka. Wadamada Reer Galbeedka ma rabaan inay soo saaraan wax soo saar dalkooda ka mid ah. Turkey u korayo la model dhoofinta-oriented horumarinta. Si kastaba ha noqotee, waa inaan sidoo kale tixgelinnaa xaqiiqda ah inaan ku tiirsanaano alaabta ceeriin. Sidaa daraadeed, waa inaan qeexnaa dhibaatooyinka aan la kulanno inta aan ku guda jirno helitaanka agabkan cayriin si wanaagsan oo aan diiradda saarno qodobbada xalka halkan. Qaar ka mid ah waxyaabaha aan la soo saaray ee Turkey. Sidaa darteed, waa inaan ku jirnaa silsiladaha sahayda adduunka markasta.
Waxa ugu muhiimsani waa in la xisaabiyo khataraha oo dhan oo la qaado tallaabooyinka lagama maarmaanka ah. Waxaan u baahanahay inaan si habsami leh oo si joogta ah firfircooni ugu sameysanno marka loo eego silsiladda sahayda iyo saadka iyo inaan xoojino nidaamkeena maaraynta dhibaatooyinka muddada dhow. Marka waa inaan helnaa qaabab aan dhaqaale ahaan uga bedesho nooca sahayda hal-xarunta ah una gudubto noocyada saadka ee xarumaha badan. Waa inaan soo saarno wax soo saar istiraatiiji ah dalkeenna.
Natiijo ahaan, muhiimadda ikhtiyaarrada xad-dhaafka ah iyo karti-darrooyinka silsiladaha sahaydu mar kale soo baxeen. Waxaa la fahamsan yahay in xulashooyinka in hore loo go'aamin doono labada geeddi-socod ee logistics iyo wax soo saar, iyo horumarka waa in si habsami leh loola socdaa midka ugu habboonna waa in loo adeegsadaa si waafaqsan shuruudaha.
Madaxweynaha Ururka Saadka (LODER)
Mashruuca xadiidka xawaaraha dheereeya ee Istanbul-Ankara Geyve-Sapanca iyo dhismaha…
Evraz oo u Diyaargaroobaya Jidadka Tareenka Ruushka ee Shanta Sanadood
Ansteel waxay isticmaashaa tareen culus xadiidka xawaaraha sare ee Harbin-Dalian
Ansteel waxay isticmaashaa tareen culus ee xadiidka xawaaraha sare ee Harbin-Dalian
Tibnor waxa uu siiyaa birta loogu talagalay wabiyada macdanta birta ee LKAB
Siemens waxay soo saartaa xayiraadaha Metro Lines ee Doha, Qatar.
Hababka jeermiska jeermiska